Hidhamuu Dr. Mararaaf Furmaanni Gama Siyaasaa Barbaadamuu Qaba
Muddee 06, 2016
Faayilii - Deeggartoonii Dr. Mararaa Guddinaa yeroo suuraa isaan kaasan, duula nafiladhaa filannoo biyyoleessaa Itoophiyaa
Dr. Mararaa Guddinaa qabsaa’aa karaa nagaa ta’uu isaanii ni beekna kan jedhan hogganoonni paartilee mormituu fi miseensoonni paarlaamaa duraanii mootummaan dhimma kana gara bal’inaa fi obsaan ilaalee xumura akka itti godhu waamicha dhiyeessanii jiru. Hidhamuun Doktoor Mararaa qabsoo karaa nagaan gaggeeffamu irratti dhibbaa akka qabaatus hubachisanii jiran.
Doktoor Mararaan labsii yeroo hatattamaa cabsan jedhamee to’annaa jala oolfamuu isaanii aangawoonni biyyattii dubbatanii jiru. Tarkaanfiin kun fudhatamuun marii mootummaan mormitoota waliinan gaggeessa jechaa jiru ija shakkiin akka ilaaluu nu taasisee jira jedhu hogganoonni mormituu.
Karaa labsii yeroo hatattamaas ta’e gama seera farra shoroorkeessummaan Dr. Mararaan waan hin hubanne qabu taanaan mootummaa waliin dubbatanii furuun barbaachisaa akka ta’e dubbatan. Xiqii fi waan gam lameen tuttuqu barbaachisaa akka hin ta’iin illee hubachisanii jiran.
Gabaasaa guutuu kana cuqaasaa tii dhaggeeffadhaa
Gaazzexeessoota FBC: Seeraa Ala Jijjirramuu Keenya Morminaan Nu Ari’an
Bulchootii Afrikaa Pirezi., Kuubaa ka duri nama galataa jedhaniin namii Itoophiyaa durii achitti baratelleen guddoo faarsa
IAAF Almaaz Ayyaanaatii fi atileeti Useen Boolti Atileetota Jajjaboo Baranaa jedhee Jimaata dabre keessa badhaase
Abukaatoo: Namoonni Gubachuu Mana Hidhaa Qilinxoon Himataman Dararaan Nu Irratti Gaggeeffamu Hammaate Jedhu
Gammadaa Waariyoo: “ Mormii Uummataa Addunyaan Akka Dhaga’uu gochuu” Ka Jedhuun Yaade